Ngaba ii-infographics ezimbi zonakalisa intengiso yakho? #BWELA | Martech Zone
Ngaba ii-infographics ezimbi zonakalisa intengiso yakho? #BWELA
NgoLwesine, Novemba 3, 2011 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
UTom Webster Inqaku eliphambili ngale ntsasa kwiBlogWorld Expo ibilungile… kodwa thina kuthi kushishino lomxholo sithathe iqokobhe. UTom ngumbalobalo kwaye uyithatha nzulu imisebenzi yakhe yobugcisa… ke xa ebona ukuhlaselwa kwe-infographics kwiwebhu kukhupha iingcinga ezimbi kwidatha engaphelelanga, ubachaza njengo ukukhathazeka.
Umcimbi kaTom kukuba infographics isetyenziselwa ukuhambisa umxholo kwaye abantu bayabanyanzela-ngamanye amaxesha kumhla obekiweyo. UTom akakholelwa ukuba asetyenziselwa iinjongo zabo eziphambili -kusasaza idatha kwifomathi yemifanekiso ekulula ukuyetyisa. (Qaphela: Khange ndibhale phantsi okanye ndithathe amanqaku amaninzi ngexesha lenqaku eliphambili, ke ndiyathemba ukuba iposti yam apha imele umyalezo wakhe ngokudibeneyo).
Omnye umzekelo uTom awubonisileyo yayiyingxelo engezantsi ... apho igcisa lathatha inkululeko yokutshintsha ubungakanani (ouch). Ayisiyiyo loo nto kuphela, kukho ezinye izinto ezininzi ezibandakanyekileyo kangangokuba i-infographic ayinantsingiselo ngokoqobo:
Ngaba ukhona umntu obuza loo nto?
Andiphikisani noTom ngokubhekisele kumgangatho kunye nobunzulu bedatha, unobangela kunye nokunxibelelana, kunye nemifanekiso ebangela ukuba kuboniswe infographics. Kodwa iyandicaphukisa into yokuba ngandlel 'ithile iyasilela xa abaniki-mxholo betyhala olu lwazi ngaphandle. I-infographic ebonelela ngedatha kwi amajelo eendaba ezentlalo akufuneki ibonwe? Hogwash.
I-infographic kumaxesha eendaba ezentlalo iphakamisa ulwazi lokuba ixesha leetweets zakho nako ifuthe kwinqanaba lokuthatha inxaxheba kwimidiya yoluntu okanye unokwandisa abaphulaphuli ofikelela kubo. Ngokoluvo lwam, ukuba infographics ezinqabileyo Basenza kakubi, ke kubahlalutyi izicelo kufuneka zibe zicocekile. Yonke idatha ebonelelwe kuyo kubahlalutyi kufuna ukuphononongwa nokumba nzulu ukufumana amathuba okuphucula intengiso yakho kwi-Intanethi.
Idatha yemidiya yoluntu ayilunganga ekunikezeleni iimpendulo, kodwa yeyokufunda ukubuza imibuzo engcono.
Ungathini xa uTom efaka esakhe isicatshulwa:
infografikhi abalunganga ekunikezeleni iimpendulo, kodwa ngezantsi zilungele ukufunda buza imibuzo engcono
Ndingaxeli ukuba i-infographic embi inokuba yiyo evelisa ngakumbi ngaphezu komkhulu, kuba iphakamisa ezi ntlobo zemibuzo kunye neencoko. Indawo yam yokugqibela yebhlog ikhombe oku… apho kubhalwe infographic I-YouTube ibulala iTV yabuzwa.
Ndiyarhana ukuba abalandeli bam baphucukile kakhulu kunokuba uTom enokucinga. Asingobabalo-manani, kodwa asikuthathi yonke into esiyibonayo njengenyaniso. UTom ukhankanye ukuba abavelisi bomxholo kufuneka benze owabo umsebenzi wesikolo kwaye uvelise infographics esemgangathweni kunokuba uthembele kwabanye. Andivumi. Ndiyakholelwa kwixabiso lokusasaza kunye nokuxoxa (ekuthiwa-njalo) nge-infographics embi kukuba baqala ingxoxo.
Uxanduva alukho kubavelisi bomxholo, uxanduva lukukuthengisa ukuba benze umsebenzi wabo wasekhaya. I-infographics ayizibulali iindlela zokuthengisa, abathengisi benza.
Ngaba i-YouTube iyabulala iTV?
I-VaultPress igcina iWindowsPress ikhuselekile
Novemba 4, 2011 ngo-2: 41 PM
Enkosi ngokuya kwiseshoni yam, uDouglas- nangombuzo wakho emva kwentetho yam. Ngokuqinisekileyo andikukujongeli phantsi ukuphucuka kwabaphulaphuli bakho! I-infographics inokuba yinto emangalisayo, kwaye ibalulekile- imizuzu emi-5 endiyichithe eFlorence Nightingale ngethemba lokuba ndiyidlulisile- kodwa ndoda, zimbi infographics ezixhaphakileyo ngoku. Ndonwabile ukuqala kwam incoko- kwaye ndiyavuya ukuba uyaqhubeka.
Novemba 4, 2011 ngo-3: 13 PM
Enkosi Tom! Yayiyintetho emnandi kwaye… NDIZAKUQINISEKA ngakumbi ekugxekeni kwam i-infographics embi ngenxa yayo. Kananjalo, ngokuqinisekileyo ndiya kulumkisa abaphulaphuli bam xa zizigqibo ezinokubabeka engxakini!
Nov 8, 2011 kwi-10: 53 AM
Ngoku abathengisi babambisile kumathuba "amakhonkco okuloba" e-infographics, kubonakala ngathi ngekhe uhambe usuku ungakhange ubone entsha. Ezinye zilungile kwaye ezinye zimbi. Ndiyakholelwa ukuba xa kufikwa ekwenzeni naluphi na uhlobo lomxholo (kubandakanya infographics) ukuba ayingowomgangatho olungileyo, ungazikhathazi.